# ह्यासट्यागको इतिहास | Martech Zone
# ह्यासट्यागको ईतिहास
शुक्रवार, नोभेम्बर ०,, २०२० बिहीबार, सेप्टेम्बर 4, 2014 Douglas Karr
यदि तपाईं ह्यासट्यागमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, यो जाँच गर्नुहोस् ह्याशट्याग गाइड। केही व्यक्ति अझै सक्रिय रूपमा ह्याशटैगहरू कार्यान्वयनमा क्रिन्ज गर्दछ किनभने यो कन्प्रिभेटेड र अलि अनियमित देखिन्छ। म वास्तवमै उत्सुक छु किन प्लेटफर्महरू केवल प्रतीक लुकाउँदैनन् र केवल हाइपरलिंक थप्दछ ताकि पाठ पढ्न सजिलो होस्। उही तरीका जब तपाईं @ वा + फेसबुक वा गुगल + मा टाइप गर्नुहुन्छ ... प्लेटफर्मले प्रतीक लुकाउँछ तर तपाइँले हाइलाइट गरिरहनुभएको खातामा प्रभावकारी रूपमा लि links्क गर्दछ।
पहिलो हैशटैग को उपयोग गर्ने को लागी आश्चर्य छ? तपाईं २०० Twitter मा ट्विटरमा क्रिस मेसिनालाई धन्यवाद दिन सक्नुहुन्छ!
तपाईं समूहहरूको लागि # (पाउन्ड) प्रयोगको बारेमा कसरी महसुस गर्नुहुन्छ। त्यहाँ भए जस्तो #barcamp [msg]?
- क्रिस मेसिना @ (@ chrismessina) अगस्ट 23, 2007
ह्याशट्यागहरू ट्र्याकिंग र रिपोर्टिंगको माध्यम मात्र होइनन्, तिनीहरू दिइएको शीर्षकमा अनुसन्धान गर्ने पनि अविश्वसनीय तरीका हुन् - वा कुनै विशेष शीर्षकमा जानकारीको धारा प्राप्त गर्दै। हामीले बाहिर सूचीबद्ध गरेका छौं उत्तम ह्यासट्याग अनुसन्धान उपकरण तपाईको लागि यदि तपाई गहिरो गोता लिन चाहानुहुन्छ भने। तपाईका उत्पादनहरू, सेवाहरू, र उद्योगका लागि ह्यासट्याग के हुन्? ती कुराकानीहरूको बीचमा तपाईंको आवाजको साझेदारी के हो? के त्यहाँ कुराकानी भइरहेको छ कि तपाईंको बिक्री र मार्केटिंग विभाग भित्र हाल्नु पर्छ?
र यो त्यहाँ रोकिदैन। ह्यासट्यागहरूले प्रत्येक दिन, हरेक दिनको जीवन एकीकृत गरेका छन्। एक विद्यार्थीको इन्स्टाग्राम पिकिबाट एक सीएमओको ट्वीट्समा, ह्यासट्यागको प्रयोग व्यापक लोकप्रियतामा द्रुत भएको छ। यस इन्फोग्राफिकमा, अफरपपले ह्याशट्यागको जीवनकालका केही मुख्य क्षणहरू कम्पाइल गरे जुन यो सामान्य चिह्न विश्वव्यापी प्रतिमामा कसरी परिणत भयो भन्ने बारे अझ राम्रो विचार पाउन।
टैग: क्रिस मेसिनाchrismessinaपहिलो ह्याशट्यागह्यशट्यागhashtags को इतिहासइंफोग्राफ़कप्रस्तावपपtwitter
अनलाइन व्यवसायहरू अगाडि रहन मार्केटिंग शिफ्ट गर्नु आवश्यक छ